IGAD oo War kasoo saartay Wada hadalada Galmudug iyo Ahlusuna – Radio Muqdisho
IGAD oo War kasoo saartay Wada hadalada Galmudug iyo Ahlusuna
01 Diseembar 2017, Jabuuti: Howlgalka Gaarka ah ee IGAD ee Soomaaliya (ISMS) oo leh kaalin hoggaamineed.
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wadashaqeynta Sanduuqa Stability Fund (SSF)
qabsashadii “Problem Solving and Negotiations in Djibouti” laga bilaabo 27th-30th November.
Tababarka waxaa qabanqaabiyey machadka Cligendael ee Netherlands oo ujeedada leh
ee ka qaybgalayaasha iyada oo loo marayo hababka ugu habboon ee gorgortanka leh iyo tixraacyada waxqabadka ee loogu talagalay dib-u-heshiisiin guulaystay.
Tababarka waxaa ka soo qayb galay wufuud ka kala socotay Maamulka Galmudug iyo Ahlul Sunna Wal Jamaaca uu hoggaaminayo Madaxweyne Axmed Ducaale Gelle iyo Sheekh Maxamed Cali Xasan (Shakir), Hoggaamiyaha Ahlu Sunna Wal Jamaaca siday u kala horreeyaan. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ahayd waxaa matalayay Hon. Cabdullaahi Faarax Weheliye, Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Arrimaha Federaalka iyo Dib u heshiisiinta.
Hoggaanka Maamulka Galmudug iyo Ahlul Sunna Wal Jamaaca ayaa soo bandhigay waxyaabahan soo socda warcelin ku saabsan aqoon isweydaarsiga
Waad ku mahadsantihiin oo soo dhoweeyeen taageerada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya aqoon iswaydaarsi.
maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaa waxay sii wadi doonaan dhismaha dawladnimada iyo maamulka.
Wuxuu xoogga saarey baahida loo qabo in si firfircoon uga qaybqaato sidii wax looga qaban lahaa dhammaan arrimaha la xariira iyada oo la eegayo sameynta dawlad midaysan.
Waxaa la qiray in aqoon-is-waydaarsigu uu fursado u fidiyay hoggaanka iyo ergooyinka si ay u dhexgalaan, dammaanad qaadka Maamul ku dhisan hab ay ku dheehan tahay kalsooni labada dhinac ah.
La socodsiiyay qanacsanaanta in aqoon-is-weydaarsiga uu abuuray marxalad sahlaysa siyaabaha loo soo galo fahamka guud ee dhibaatada iyo xalkeeda.
Waxaa laysku raacsan yahay in laga heshiiyay in la gaaro Isfaham wadajir ah.
Wasiir dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha federaalka iyo Dibu heshiisiinta ayaa mahad celin usoo jeediyay dhinacydii wada hadalku dhexmaray ee ka kala socday Ahlusuna iyo Galmudug isagoo sidoo kale u mahad celiyaya Xubnihi ka socday Beesha Caalamka ee gar wadeenka ka haaa Wada hadalka.
Hugaamiyaashada Ahlusuna iyo Galmudug ayaa qiray in Shacabka ku nool Gobolada Mudug iyo Galguduud ay u baahan yihiinMaamul mid ah diyaarna ay u yihiin in ay dhisaan.
R/wasaare Kheyre oo ka qeyb-galay Munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka Xukuumadda
Dhageyso: Shacabka Cadaado oo soo dhaweeyey Shirka Jabuuti